काठमाडाैँका १० निर्वाचन क्षेत्र कसले कति जित्याे ? | चन्द्रागिरि न्युज
Home निर्वाचन काठमाडाैँका १० निर्वाचन क्षेत्र कसले कति जित्याे ?
काठमाडाैँका १० निर्वाचन क्षेत्र कसले कति जित्याे ?
२०७४, २४ मंसिर आईतवार ११:१५
काठमाडौँ । काठमाडौँका १० क्षेत्र मध्ये ६ वटामा नेकपा एमाले र बाँकी ४ मा नेपाली काँग्रेसले विजय हासिल गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बरमा १, ४, ६ र १० मा नेपाली काँग्रेसले विजय हासिल गरेको हो भने २,३, ५, ७, ८ र ९ मा नेकपा एमालेले नतिजा अाफ्नाे पक्षमा पारेकाे छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा काँग्रेसका प्रकाशमान सिंह १० हजार ९ सय ३६ मतसहित विजयी भए । उनलार्इ पछ्याएका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विवेशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रले १० हजार १ सय १८ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ४ मा काँग्रेसका गगन थापा २१ हजार ५ सय ५८ मत प्राप्त गरी विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका राजन भट्टराईले १८१४० मत प्राप्त गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर ६ मा भीमसेनदास प्रधानले १६७८५ मतसहित विजयी हासिल गरे । साे क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका झक्कु सुवेदीले १५ हजार ४८५ मत ल्याएका थिए । क्षेत्र नम्बर १० मा विजयी काँग्रेसका राजन केसीले २४ हजार १ सय ९० मत प्राप्त गर्दा माओवादीका हितमान शाक्यले २१ हजार ९ सय ७ मत प्राप्त गरे ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका माधवकुमार नेपाल २७३६६ मतसहित विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका दीपक कुइँकेलले १४९०२ मत प्राप्त गरे,
क्षेत्र नम्बर ३ मा १९१६९ मत प्राप्त गरी नेकपा एमालेका कृष्ण राईले विजय हासिल गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसकी अम्बिका बस्नेतले १४,८८४ मत प्राप्त गरिन्।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेलले २३५२९ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतले १३१६९ मत प्राप्त गरे भने विवेकशील साझाका उज्ज्वल थापाले जम्मा २००९ मत प्राप्त गरे ।
एमालेले जितेकाे अर्काे क्षेत्र नम्बर ७ मा राप्रपाका विक्रमबहादुर थापालाई हराउँदै एमालेका रामवीर मानन्धरले जित सुनिश्चित गरे । थापाले १००९७ मत प्राप्त गर्दा मानन्धरले १८१०२ मत प्राप्त गरे।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ८ मा एमालेका जिवनराम श्रेष्ठ १३३९७ मतसहित विजयी हुँदा काँग्रेसका नविन्द्रराज जोशीले १२९५३ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ९ मा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २२८५२ मत सहित विजय हासिल गरे। काँग्रेसका ध्यान गोविन्द रञ्जितले १४८०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
चन्द्रागिरि न.पा वडा १ स्तिथ दहचोकका निवासी ७ बर्षिय बालकमा कोरोना संक्रमण पुष्ठि भएको छ